MANAMAFY NY FISINTAHANA NY PARLEMANTERA ANKOLAFY RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
MANAMAFY NY FISINTAHANA NY PARLEMANTERA ANKOLAFY RAVALOMANANA
Araka ny efa nambara omaly teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka dia nisy ny fanambarana avy amin’ireo Parlemantera Ankolafy Ravalomanana androany. Toy izao izay fanambarana izay. Izahay mpikambana amin’ny kongresy sy amin’ny filankevitra Ambonin’ny tetezamita( CT sy CST) notendren’ny Ankolafy Ravalomanana tamin’ny fampiharana ny tondrozotra dia. Manamarina fa mihombo hatrany ny olana politika nateraky ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 rehefa nivadika ho famikirana amin’ny fahefana tian-kano sy tsy tàn-dalàna ny fampiharana ny tondrozotra, tsipahin’ny ankolafy samihafa izany sarontava vaovaon’ny tetezamita mandeha ila izany; tototra olana ny fiainam-bahoaka, mikororosy ny fihariana la lalina ny fahantran’ny mponina; ho an’ny mponina faritra samihafa, ny sokajin’olona samihafa ary hatramin’ny mpiasam-panjakana dia ny manilika izoa fomba fitondrana izao no làlana. Mampatsiahy ireo paipaika mampandamoka ny fikatsahana marimaritra iraisana eo amin’ny andrim-pitondrana mpanao lalàna. Izay tsy hampisy fanaovan-dalàna marimaritra iraisana no ataon’ny ankilany nandrobam-pahefana. Eo amin’ny fanendren-dRajoelina olona mpanoa azy manokana ambonin’izay nifanarahana hakana tombon’isa amin’ny demokrasia petatoko ao amin’ny antenimiera. Eo ny fiolakolay ny ministry ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana(MRI) rehefa hamolavola lalàna takian’ny famahana krizy ka tsy misy izay dinika mialoha hakana marimaritra iraisana. Efa nantsangana anefa ny vaomiera iombonan’ny andrim-pitondrana hiarahan’ny ankolafy sy ny vaomiera parlemantera, ny ministera.. manao izany (didim-pitondrana iraisana ministera).
Miharihary indrindra amin’izany ny fomba nanaovana ny lalàna momba ny amnistia. Novolavolaina tsisy marimaritra iraisana. Nosoratana teny malagasy sy teny farntsay tsy misy mirindra. Nolaniana tamina demokrasia petatoko. Teo Ambohijatovo ny 28 avrily 2012, teo ambany mason’ny Sadc ireo parlemanteran’ny ankolafy Ravalomanana, tao ny filohan’ny kongresy sy ny filoha lefitry ny CST. Nikasa hitatitra ny asany tamin’y vahoaka no nanaovan’andian’olona manao fanamiana herisetra satria Rajoelina nilaza fa tsy manaiky an’izany fanaovana tatitra izany. Tsy azo itokisana ny tetezamita ary mihemotra ny fanohanan’ny sehatra iraisam-pirenena noho io fomba mandeha ila io ary izay no nampisintaka anay tamin’ny asan’ny CT sy CST. Manahy fatratra ny amin’ny firenena izahay parlemantera noho io fitondrana mifikitra nefa tsy mahefa intsony io. Tsy efany intsony ny miantoka ny aina sy fananan’ny mponina, tsy efany intsony ny mampandeha amin’ny laoniny ny fiainam-bahoaka, ny fitsaboana sy fanabeazana. Koa hamafisanay ny fanapahan-kevitra misintaka amin’ny fivorian’ny CT sy CST. Raha mbola mitohy mandringa sy manosihosy ny tondrozotra tahaka io ny tetezamita mijoro. Raha mbola mitohy mampifandrafy politika tahaio na manosika hampiala ny ankolafy Ravalomanana ny manodidina an-dRajoelina izay efa mitetika hanafoana ny tondrozotra rahateo. Mitohy kosa ny adidinay mihevitra ny raharaham-pirenena. Tsipahinay rehefa mety ho lalàna natao na mbola hatao ho amin’ny fampitoniana kanefa volavolaina sy laniana ivelan’ny marimaritra iraisana. Tetika hanaovana fifidianana petatoko hanendrena prezidan’ny repoblika sy parlemantera hanohy ny efa làlan’ny fandrombam-pahefana fotsiny izany. Derainay ny finiavan’ny Sadc hampihaona ny prezidà Ravalomanana Marc amin’Ingahy Rajoelina mba hampiravona ireo olana tsy mampandeha ny tondrozotra amin’ny laoniny ireo. Manohana azy amin’izany ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Potika ny firenena ary mizotra amin’ny tsisy fanjakana ny tany koa fady ny mitaredretra. Melohinay noho izany ny fandrirarirana. Iangavianay ny parlemantera sy ny mambran’ny Governemanta, aoka ho an-jorom-bala izay mikiribiby amin’izao tetezamita tian-kano tsitiankano miafina endrika izao. Manainga antsika hifarimbona ho amin’ny marimaritra iraisana, hampihatra amin’ny laoniny ny tondrozotra ary hampifandanja ny andrim-pitondrana sy ny hery anivony. Izay no miantoka ny làlan-kivoahana sy ny vahaolana faobe ary mahatsinjo ny fankatoavana iraisam-pirenena. Toy izay ilay fanambarana ary manao sonia izany ireo filohan’ny groupe parlemantera.
Auteur Solo Razafy*Publié le 14 juillet 2012 14 juillet 2012 Catégories Politique
8 réflexions sur « MANAMAFY NY FISINTAHANA NY PARLEMANTERA ANKOLAFY RAVALOMANANA »
Misintaka i Mamy Rakotoarivelo, kanefa manao sonia an’izay Lalàna rehetra avoakan’ny foza ; amin’izay indray Lalàna mandetika an’ny Prezidà Ravalomanana ary koa entina hampijaliana ny vahoaka malagasy mafimafy kokoa !
Koa dia inona marina ity hoe MISINTAKA ity ?
NY MIALA TANTERARAKA, NO TSARA TOKONY ATAONAREO REHETRA ! NY FIHIDIRANAREO NA NY FISINTAHANAREO, TSY NAHASAKANA NY FOZA HANAO SY HANOY NY ASARATSINY !!!
raekoto dit :
14 juillet 2012 à 19 h 27 min
ho any FOZA tahaka kintana dia miala tanteraka
voalohany ny mouvance RAVALO ny takiany manantateraka ny FR manomboka 1 ka mifarana 45koa inona no ialany
ny FOZA tsy manaraka ny FR no tokony hiala
ho hita eo fa ny fihaonana aminy RAVALO dia midika fa vita ny aminy VENDRANA
miaritra dit :
14 juillet 2012 à 19 h 28 min
tena tsara io hevitra fialana io ;resaka atao fotsiny fa tsy mafoy ny tombotsoa satria efa maty dia novelomina indray ireo parlelementaires ireo ;mamitaka ny mpitolona fotsiny!mialà ary aza mandray karama raha sahy!nilavo lefona ry friefemo tandroany;rava ny tetezamita fa feno olona analakely ary mikatso ny asampanjaka
14 juillet 2012 à 20 h 27 min
tsy mba nazava mihitsy no nidirana tao, mitonatonana ohatra ny vinanto tsy mahare foza ve? sa mivadika ati-doha voa ny mosavim-poza sa notapahan’ny foza ny hazon-damosina ?
mba akao lesona daholo izay lasa rehetra izay fa tsy tokony hisarigaigy amin’adala.
Ny olona rehefa miady dia mametraka tanjona mody Ra8 ary mihizinizina amin’iny na inona hitranga na inona hidona. Izany no ahitan’izao tontolo izao fa olo mendrika ka mahate- hihaino.
Alaviro haingana ny foza fa misy aretim-be mifindra.
ramena billy dit :
14 juillet 2012 à 21 h 18 min
Tsotsa fotsiny hoy RAVALOMANAN : hainareo ny niditra, ka tsy maintsy hainareo ny mivoaka, sa ahoana ry zalahy ? Mbola any @ Dada ho’aho ny lakile fa tsy natsipiny tany anaty ranomasina izany. Sa natsipiny dia tsy nahay nitanty ny vahoaka ?
14 juillet 2012 à 23 h 44 min
Aleo aho tsy hiteny betsaka !!!sao manonofy ratsy eto.
Manome litika !!!
de ahoana zany ireny fihhazakazahanareo miady laharana ireny maka vola sy solika ao @tsimbapierrot ireny?Aza mampiresaka hoa fa mbola ho faizin,ireo magroistes ireo ianareo àandro tsy ampoizinareo
hoay lay zaza mpitolona e!aiza ny zon,ny kilonga @zao?Aza mba mampiesona ry zalahy a:ny sosy raisina ihany
Précédent Article précédent : HO AVY ARY HODY AMIN’IZAY NY FILOHA RAVALOMANANA hoy RAKOTONIRINA MANANDAFY
Suivant Article suivant : AO AMBOHITSOROHITRA I REMENABILA HOY CONSTANT RAVELOSON